Amasheya endiza enenzuzo. Umqondisi wethu usiza ngesinqumo sokuthenga
Qala ingadi Amathuluzi engadini namathuluzi engadini uthango imithi
Lapho entwasahlobo nasehlobo yonke into ensimini ikhula eluhlaza futhi izihlahla nezihlahla, ihora lezingcweti zelitshe lifikile. Ngayo, ameva eningi, izinhlamvu namagatsha ezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo kanye nezinhlobo zezihlahla nezihlahla zingafakwa emgqeni. Ukuqothula i-hedge akuyona nje into eyayiqondwa ngaphambili. Ngoba izitsha ezibukhali azikwazi ukuhanjiswa ngesandla kuphela, kepha futhi nazo ezihamba phambili. Manje kukhona amamodeli ngephethiloli kodwa futhi nebhethri. Ungakhohlwa, umsebenzisi kufanele abe ithuluzi elibukhali kakhulu ngezingcweti zensimbi, kungakhathaliseki ukuthi uhanjiswe ngesandla noma umshini wokumisa. Ngakho-ke ukunakekelwa okukhulu kunikezwa uma ufuna kuphela ukusika utshani, izihlahla nezihlamba ngisho namalungu akho siqu. Njengoba uhlobo, ubukhulu kanye nokushayela kwe-trimmer ye-hedge kumele kulungiswe ukuphikisana, izinhlobo ezihlukahlukene zokugaya uhlaka zizokwethula kancane ngezansi:
1 I-hedge trimmer yebhethri
2 Bush izinzipho
3 Ukuqothula kwe-electric hedge
4 I-injini ye-hedge trimmer
5 Izingubo zesandla
6 Amasheya wezinselo nge-fangsack
7 Izindwangu zezintambo ezinde futhi telescopic
I-hedge trimmer yebhethri
Uma unesithakazelo ekunqumeni kwesikhumba ngesithuthuthu,uthango imithi ukuhluka okulungile. Leli thuluzi lisebenza nge-voltage ye-18 Volt noma i-36 Volt, kuye ngamandla afunayo. Ku-36 Volt, i-shear yegodi ngokuvamile inokweba yokushaja okusheshayo okungakwazi ukukhokha ngokuphelele ngaphakathi kwe-30 kumaminithi we-45. Ngethethri elinjalo, izingubo zezingodo zingaqhutshwa cishe ngamaminithi angu-50. Kukhona ngisho nentengo ephakeme ngisho namakhanda e-battery hedge, angashayela ibanga elincane lokubona. Kodwa ngokuvamile, izinto ezisensimini zifanelekile ikakhulukazi emisebenzini encane neyinkimbinkimbi. Lokhu kubandakanya ukugoba kwenkundla engekho emthethweni nokucubungula izihlahla ezincane engadini yangaphambili.
Ibhethri eyakhelwe ngaphakathi yenza umsebenzisi ohamba phambili kakhulu, ngaphandle kokubamba ngamakhodi namasokhethi. Ngaphezu kwalokho, isisindo sibe ngamakhilogremu amathathu kuya kwangu-4 ngeyunithi, ngaphansi kwesisindo se-hedge trimmer esebenzisa amandla kagesi noma ophethiloli. Futhi intengo ishibhile kakhulu kunezinye izinhlobonhlobo. Okungalungile ukuthi ukusebenza akukona kakhulu. Ngokwezimfuneko zokusebenza eziphakeme, ikhebula alikwazi ukusetshenziselwa ukucubungula ibhethri lokugaya. Endabeni yezingubo zebhethri, kukhona amabhethri okufaka esikhundleni noma esikhundleni, angathengwa ekuhwebeni. Amanye amadivaysi futhi asebenza ngamabhethri amabili. Kodwa-ke, naphezu kwalokhu kuthuthukiswa, ukusebenza komcibisholo wensiza kagesi kusuka ekutheni uhla lwebhethri awukwazi ukufezwa. Kumcibisholo webhethri wokucwenga kufanele ubuyele emuva, uma kungenjalo uhlela izinhlelo ezincane zokusoka, okungafanele kube ngumsindo omkhulu.
I-Makita Hedge Trimer (52 cm, 18 V, ngaphandle kwebhethri, ...
I-Bosch i-hedge trimer AHS 54-20 LI (elayishwa kabusha ...
Isikhuni se-hedge yebhethri le-Black + Decker (nge ...
Ama-shears webhethri ayitholakali kuphela amaheji, kodwa futhi ayatholakala ngezihlahla. Lokhu kukhishwa kwebhethri kwebhethri kuvame ukuqondiswa ngesandla futhi kubonakala inkemba encane. I-voltage ye-shrub shears iphansi kakhulu nge-12 Volt, kunokuba isetshenziswe ngebhethri ukugaya. Amanethiwekhi amaningi anebhethri ye-lithium-ion. Lokhu kokubili kulula ukuyifaka, kanye nesinye nesigamu emahoreni amabili okusebenza isikhathi ikakhulukazi esinamandla. Ama-shrub shears afanelana nezidingo ezikhethekile zezihlahla nezihlahla. Ngaphambi kokuba uyisebenzise, ​​kufanele ucabange uhlobo lwotshani nezihlahla ezizophathwa.
Ukuqothula kwe-electric hedge
Uma ufuna ukubeka amagatsha akho amakhulu kunazo zonke engadini yakho, kufanele futhi usebenzise umcibisholo wensiza kagesi esikhundleni sokuqhayisa kwebhethri. Leli thuluzi lisebenza ngekhebula. Lokhu kusho ukuthi ukuhamba kuvinjelwe, kodwa ukusebenza okuphakeme kuqinisekisiwe. Kukhona nezinye izesekeli ezihlukene zokugaya ugesi we-ugesi, isibonelo isibambo se-telescopic noma i-fang. Ikhebula lamamodeli amanje we-trimmer kagesi ugesi ngokuvamile amamitha amaningana ubude, ngakho-ke amabanga amade angakwazi ukumbozwa. Kunconywa ngokucophelela, ngoba kaningi akuqinisekisi ukuthi ikhebula alikho endaweni yokusika bese uyayinqamula ngezikhisi. Noma ubani okumele asebenze ngezindwangu zakhe zokugoba phezulu noma esiteji uzobona ukungalungi kwekhebula kagesi. Ngokuba izingubo zezindondo zikagesi kufanele zinqume ukuthi ubani onamandla amakhulu kunokugquma kwebhethri, kodwa akafuni ukukhiqiza umsindo omningi njengokungathi uhla lwephethiloli. Ama-trimmers we-electric hedge ayenemvelo kakhulu. Ama-trimmers asegesi anezinsimbi ezinde kakhulu kunezingcweti zebhethri futhi zikhanya kakhulu futhi zikwazi ukubhekana nokulula kunezinsimbi zokugcoba.
I-injini ye-hedge trimmer
Amamodeli amakhulu kunawo wonke futhi anamandla kunawo wonke ama-hearge shears anikwe amandla yizinjini kanye nophethiloli. Lezi zindwangu zokugoba zingaba namahlumela amakhulu kakhulu futhi zithole amagatsha amaningi kakhulu. Ngenxa yokushayela kwayo kaningi kunesisindo esikhulu futhi ngakho-ke ngempela kufanele isetshenziswe ochwepheshe. I-injini ye-hedge yokucwenga iveza kancane kancane imfucumfucu enkulu yokukhipha kanye nomsindo ongapheli, ukuze ngokuvamile abavikeli bezwi kufanele basebenzise. Intengo yezimoto zezingodo ezisezingeni eliphezulu ibuye iphakeme nakakhulu kunamanye amamodeli. Uma ungayidingi leli thuluzi kaningi kakhulu, akufanele ulithengise futhi uliqashe kangcono. Inzuzo enkulu kunazo zonke izinsimbi ze-hedge trimmers akungabazeki ukusebenza kwazo. Ngokuvamile ziqhutshwa yi-injini emibili. Uma umcibisholo we-hedge we-ugesi ungacindezela ama-saw blade bese ubalaza kamuva, lokhu akumele kulindeleke nge-trimmer hemge trimer. I-sawblade ne-robot emandla futhi ivumela amagatsha agxilile ukuba alulahle kalula. Leli thuluzi alanele amalogi. I-chain saw kufanele isetshenziswe ngalokhu. Okunye okunye okuzuzisayo kwe-motor hedge trimer kukhona ukuguquguquka kokusetshenziswa. Izintambo azikwazi ukuphazamisa endleleni. Ukude okude akuyona inkinga. Kodwa injini nophethiloli ingakwazi kakade isisindo se-kilos. Ngakho-ke ukusetshenziswa okuhle kakhulu kungenzeka kuphela uma amandla ombuso ahambisanayo angasetshenziswa. Ngenxa yalezi zimingcele, ama-hedgehog shears ngokuvamile asetshenziselwa izinjongo zezohwebo. Noma ubani othenga ukuthenga insimbi yokugcoba insimbi kumele aqonde izindleko eziphezulu zokuthenga nokugcinwa.
Yiqiniso, kukhona namasheya wesandla, ngaphandle kokushayela. Lezi zifana nama-shears weqiniso futhi zitholakala ngobude obuhlukene bezingcwecwe ze-shear nezimbambo ezihlukile. Lezi shears zivame ukusetshenziselwa ukunciphisa izindawo ezinkulu ezinqunywe ngaphambili ngezingcingo ezithintekayo. Ukuze amahlumela ashisayo, amacembe amancane kanye nemiphetho lezi shears zensimbi zisalungile. Isandla sokuqhayisa isandla sinesibopho sobuqili emgodini wensimu futhi sinenzuzo yokuyisebenzisa uma nje uyayithanda. Amakhishi esandla nawo atholakalayo ne-bar telescopic. Nokho, ngokuvamile, lezi zithombe zihlinzekwa njengama-cutters egatsha. Nge-band, ama-shearing we-shearing nawo angadonselwa ndawonye ngaphezu kwebanga elide futhi ngaleyo ndlela amagatsha ahanjiswa.
Amasheya wezinselo nge-fangsack
Uma usebenzisa ama-shear ohlambalaza, amaqabunga amaningi, kanye nezihlahla, amagatsha namagatsha amagatsha awela emhlabathini, okumele aphinde abuyele. Lokhu kungaba yinkimbinkimbi. Futhi yingakho kubalulekile ukubuka ama-shears, okuyinto enikezwa nge okuthiwa "i-fangsack". I-fang ishintshwe ekunqunyeni okujwayelekile kwedivaysi ehambisanayo futhi ivame kakhulu noma encane kakhulu. Inhlobo yokwakha i-hose njengebhasikidi yokuqoqa inhle kakhulu. Ngakho, kokubili izinsalela ezinkulu nezincane kakhulu ziqoqwa. Ibhasikidi lingasuswa kalula. Konke, kungashiwo ukuthi esimweni sokuqothulwa kwensimbi, isikhwama sokubamba cishe sinqanda ukuphatha futhi sisendleleni yokusebenza kwezikhali endleleni. Eziningi zemibukiso yezingcweti zensimbi zinikezwa ngaphandle kwepakethe ye-traction, engathengwa njengezesekeli. Uma uthenga, kufanele uthathwe ukunakekelwa ukuze uqinisekise ukuthi umcengezi wensimbi unamadivayisi adingekayo wokufaka isikhwama.
Izindwangu zezintambo ezinde futhi telescopic
Ngaphandle kwezindwangu ezincane kakhulu zezindonga, kunezibonelo ezindala kakhulu lapho umuntu efinyelela khona uhla olubanzi olungalingani lwelashi lokubona. Izingalo ezinzima kunazo zonke futhi ezinzima kakhulu zingabuye zinqunywe ngemilenze ende kanye nemikhono emide. Kodwa-ke, akufanele kukhohliwe ukuthi sekuyisikhathi eside, kunzima kakhulu ukusebenzisa umcibisholo wensimbi. Okufanelekile lapha kukhona izingcwecwe zokugaya ugesi, njengoba zisebenza kokubili ama-saw blade kanye nesisindo esincane, njengezitha ze-hedge shears. Kodwa-ke, ezinye izindawo ensimini azikwazi ukufinyeleleka kulezi zindebe ezinde, ukuze okuthiwa ibha ye-telescopic kufanele isetshenziswe. Ukugubha udoti nge-bar enwetshiwe kubuye kubhekiswe njengendlela yokusika i-long-bar eters, futhi, ngokuyisisekelo, ukugoba okuvamile okuhambisana nesandiso esilandelayo.
Lezi zindwangu ze-telescopic i-hedge shears zitholakala ngebhethri kanye ne-electric kagesi, kanye ne-injini enikwe amandla kagesi. Mhlawumbe iphuzu elibaluleke kunazo zonke lapho uthenga umcibisholo onjalo wenqwaba yezingcingo ukuthi ingakanani i-hedges noma izihlahla ezinzima ngempela. Induku ye-telescopic enebude, ngokwesibonelo, amamitha amahlanu anengqondo kuphela uma izitshalo ezivamile zalokhu kuphakama kufanele zikhishwe ensimini. Uma ama-hedges nezihlahla ziphezulu ngamamitha amathathu kuphela, isandiso esinjalo sanele. Uma uyala i-sheesge shearge shears, uzothola ithuluzi elifanele ibha elide. Lokhu kungahle kwandiswe noma ngokuqinile noma kwifomu ye-telescopic. Ubude buhluka ezindaweni eziningi phakathi kwamamitha amabili nanhlanu. Ukucwila kwe-hedge kungakhululwa esiqongweni sebha. Uma kwenzeka injini, lokhu kufakwe ezimweni eziningi ngezansi kwenduku yokwandisa. Ngenxa yalokho, iningi labakhiqizi bazama ukushintsha iphuzu eliyinkimbinkimbi yedivayisi kude kakhulu ngangokunokwenzeka. Kodwa-ke, ngezinye izintambo ze-telescopic, le moto ingase ifakwe phezulu kwenduku, okwenza ukuba kusetshenziswe izinsimbi zezingodo ezingenakuqhathaniswa okunzima kakhulu. Umcibisholo we-telescopic we-hedge wokugcoba akufanele ube nenkinga namagatsha amakhulu. Noma kunjalo, ngaphezu kokusebenza, ukuguquguquka kokusebenza nakho kubalulekile. I-shedge shears enhle ye-hedge akufanele ikhulise kahle kuphela, kodwa ibuye iguquke ikakhulukazi ekhoneni. Akusizo usizo uma isibonakaliso sikhatsi eside kakhulu, kodwa ukugoba kwesikhumba akukwazi ukufika emaphethelweni omsila ekugcineni. Ngakho-ke ama-scissors kufanele abe ne-angle ethile kwenduku yesandiso. Lena yindlela kuphela yokunquma noma yikuphi ukuhlenga nokuhlanza ngaphandle kokukhwela isiteji. Imiphumela emihle nayo ifinyelelwa ngemivimbo emide yokusika. Lokhu kwenza sikwazi ukusika ngisho namakholo amakhulu kakhulu.
Uma ufuna ukuthola ama-hearge shears amahle kakhulu, kufanele uqaphele izinzuzo nezindleko zezinsimbi ezihlukahlukene zezindonga ngaphambi kokuthenga. Ukuhlobisa i-hedge ngebhethri kunengqondo uma umsebenzi ulula futhi ukusebenza kuphansi. Isisindo esincane, umsindo ophansi, okuguquguqukayo okusetshenziselwa ukusetshenziswa - la mathuluzi okusika enza izinkinga ezincane kodwa akakwazi ukukhokhela okuningi. Izingubo zokugqoka zamagesi zilungele imigoqo ye-telescopic kanye nezindawo ezinzima zendonga enkulu. Noma kunjalo, ikhebula lamandla likhawulela izinhlelo zokusebenza ezikhona. Uma udinga indawo enkulu futhi kufanele ubone amagatsha amakhulu, akudingeki ukuba udlule umgwaqo wamandla noma ugesi. Lezi zitsha ziyinkimbinkimbi, ngokuvamile zijwayele ukusetshenziselwa ochwepheshe futhi zibiza kakhulu ngokuthengwa nokuzijabulisa.
Izihloko ezingaphezulu zalesi sigaba: Amaqabunga ephethiloli , wotshani futhi Verticutter.
Okokugcina, amathiphu ambalwa okuthenga:
I-Bosch Hedge trimmer AHS 45-16 (isembozo se-blade, ikhathuni (420 W, 450 mm ubude wokusika, ibanga le-16 mm blade))
I-sheed shears i-AHS 45-16 - ukulungiswa kwe-hedge yokunethezeka
Kufanelekile ukusika izinhlawulo ezincane noma ezincane ukuya kuma-1m
Ngenxa yesisindo esiphansi se-2,6 kg futhi somsebenzi omude
Ukuphatha ngokunethezeka nokubonga kangcono ukubonga ngobukhulu obungaphandle
Ububanzi bokulethwa: AHS 45-16, ikhava yommese, i-carton (3165140582612)
I-Güde 94001 GHS 510 P ukucubungula kwamandla kagesi (500W, ubude be-460mm ubude, ibanga elingu-16mm, ibanga elisheshayo, umlindi wesigqila)
Injini esebenza kahle kakhulu ye-500 W yamandla aphezulu ngamandla aphansi
Ukusika ubude be-460 mm nesikhala sommese se-16 mm - ukusika okuphelele kwezihlahla zakho
Ukushintshwa kokuphepha okubamba ngazimbili kanye nommese ngokushesha kumisa ukuphepha okuphezulu emsebenzini
kufakwe isiphephelo esengeziwe
Isikhuni se-Bosch hedge trimmer AHS 70-34 (700 Watt, ibanga le-blade: 34 mm, ubude be-blade: 700 mm, ebhokisini) Display
Uthango kusilungisi AHS 70-34 - elinamandla ukhululekile uthango ahlabayo
Umsebenzi weSaw: amazinyo akhethekile ngaphambili kwommese asika kalula amagatsha aze afike kububanzi be-38 mm
Ifanelekela kakhulu uthango ngaphezu kokuphakama kwemitha ye-2
Ngomlindi wokumisa ukusikeka emadongeni nasemhlabathini
Ububanzi bokulethwa: I-Hedge trimmer AHS 70-34, isembozo sommese, ibhokisi
Black + Decker uthango kagesi kusilungisi GT5560 impumuzo ikhebula ubunzima kuxhumana ngqo namatheminali ikhebula isandiso induduzo esiphezulu - 25mm ukusika ukujiya - 550W - 60cm blade obuphelele - 2,9kgAnzeige
Umshini wokugaya udoti ulungele ukusika amagatsha kuze kufike ku-25mm obukhulu futhi ugcizelele ngokusebenza kanye nenduduzo enkulu kakhulu
I-Scedors yeHedge ibonakala ngezinyosi ze-angled geometry kanye nesimo esibucayi ngokukhethekile - ukusebenza kahle nokusika isikhathi eside semimese
Ukuhamba kwekhebula eliphephile: Ngenxa yokuxhaswa kwekhebula, ikhebula lingaqondiswa ngendlela elawulwayo / Ukuxhumeka okuqondile kwekhebula lesandiso kuqinisekisa ukuthi akukho ukuxhumeka kwekhebula okuphazamisayo kusendleleni
Induduzo enkulu: Isivunguvungu sisingatha futhi ukusatshalaliswa kwesisindo esiphakamise kahle phakathi kommese nesibambo kwakha ibhalansi enhle - ukuze kube lula ukulawula
Einhell kagesi uthango kusilungisi GE-EH 7067 (700 W, 670 mm cut obuphelele, 30 mm izinyo Isikhala, izingcaphuno ezisikwe emaphephandabeni, ikhebula impumuzo uhlobo) isikhangiso
Umsizi onamandla we-700 Watt engadini ene-length cutting we-670 millimeters kanye nokukhipha kwe-3.000 ngomzuzu.
Ama-blades enziwe nge-laser-cut ne-diamond-ground steel. Ukuvikelwa kwe-Metal gear nokuthuthumela. Isibambo esengeziwe se-ergonomic kanye nesiphathi esingemuva esiphendukayo siqinisekisa induduzo yokusebenza esiphezulu.
Ngokushesha kushintshiwe: ukuma kwelasi ngaphansi kwesigamu esisodwa sesibili neseziwe esikhulu ukuvikelwa kwesandla.
Ukuxhaswa kwekhalenda ngokusetshenziswa kabi.
Kubandakanya umqoqo wezinhlamvu ezisebenzayo. Ihlinzekwa ngomkhumbi oqinile wokugcina nokuthutha kanye nesembozo se-aluminium yesikhumba sokuvikelwa kommese.
I-Einhell kagesi hedge trimmer GH-EH 4245 (420W, 450mm urefu wokusika, ubukhulu be-12mm yokusika ugiya, amagiya wensimbi, ikhava le-aluminium blade, unogada wesandla, umlindi wokuvikela inkemba)
Isandla se-420 esiphuthumayo ne-ergonomic somsebenzi wokukhathala
Ukuphepha okukhulu ngokubheka ukuma okulinganiselwe, ukuvikelwa kwesandla kanye ne-aluminium ummese
I-absorber ye-shock absorber nge-suspension
Ukuphila isikhathi eside ngenxa yemimese yokusika i-laser-cut
Ukuhleleka okusheshayo nokuvikelwa kwenkemba ngamabhokisi epulasitiki aqinile
I-FANZTOOL ka-hedge trimmer kagesi ka-710W ngobude bokusika i-610 mm kanye nenkomba yebanga le-24 mm
I-TEST VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=P9rr5KrOP84
Isikhuni esinamandla somngcingo we-710 Watt motor, ubude be-610 mm blade nobukhulu be-24 mm
Igiya lensimbi eliqinile kanye nokusika kwamadayimane, ukusika okunhlangothi zombili kwempilo ende yenkonzo
Ngenxa yesisindo esiphansi se-3,9 kg, ukusebenza isikhathi eside kumnandi
I-Ergonomically yakhelwe ngobunono obuthambile ngokusebenza okungashelelanga
Isikwele se-Bosch hedge trimmer AHS 55-26, isembozo se-blade, ikhathuni (600 W, 550 mm blade blade, 26 mm blade spiding, 3,6 kg) Display
Ukucwenga i-AHS 55-26 kusuka ku-Bosch - ukusika ngokukhululekile kwamahlaya akho
Ukusika okungenamandla kwamagatsha kuze kufike ku-32 mm ububanzi ngenxa yokusebenza kwe-sawing
Ikakhulukazi efanelekayo ezindongeni eziphezulu kuze kufike ku-2 m
Ukuvikelwa kwamakhaza okwehliswa ezindongeni nasezingeni
Ububanzi bokulethwa: AHS 55-26, ikhava yommese, i-carton (3165140643542)
I-Gardena telescopic hedge trimmer THS 500/48: ibanga le-hedge nge-500 W, ibanga le-3.5 m, ikhanda eligoqekayo kanye nesibambo se-telescopic, ubude be-ummese abangama-48 cm, isibambo se-ergonomic nokuvikelwa komthelela, (8883-20) ukubonisa
I-telescopic: isikhutha se-hedge ngentonga ye-telescopic yokusika kalula uthango oluphezulu, kufika ku-3.5 m ububanzi
Ikhanda elilungisekayo: Ikhanda elinomsindo wokusika ophahleni olungasemuva kanye nekhava yomhlabathi
Ukusika okunamandla nangokucacile: Siyabonga ngamandla we-500 W motor namandla we-48 cm blade
Ukusebenza kwe-Ergonomic: sibonga isibambo esingeze isikhathi eside futhi senziwe ngendlela ergonomically
Ububanzi bokulethwa kufaka: i-1x telescopic hedge trimmer THS 500 / 48
IBosch Ikhaya kanye Nengadi 0600833102 Grass Shear Set, 3.6 W, 3.6 V, mnyama, luhlaza
Utshani obungenantambo kanye nezihlahla zomhluzi ezibunjiweyo Setha Isio - abasizi bengadi yansuku zonke
Umsebenzi wokuphumula ngaphandle kweziphazamiso ngenxa yohlelo lwe-anti-blocking
Ukusebenza okuningi: Uchungechunge olusha lokunamathiselwe ngokuchofoza okuningi kwenza i-Isio isebenziseke ngezindlela eziningi
Izikhathi ezincane zokushaja kanye nokuzikhandla ngenxa ye-lithium-ion technology
Ububanzi bokulethwa: iBosch Isio, ishaja, umgawuli wokusika utshani obubanzi obuyi-8 cm, chofoza okuningi isihlahla se-shear 12 cm, ibhokisi
Isilinganiselwa: 3.0/ 5. Kusuka kumavoti angu-2.
Isihloko sangaphambiliniIsikebhe sikagesi
Isihloko esilandelayoamaprotheni powder